UKUGCINWA - UKWENZIWA KWENKQUBO YAMAZWE NGAMAZWE, LTD
Intlanzi esele iFakiwe kunye nesonka
Upapasho ndaba zekhampani
Siphambukisa iimveliso zethu ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
Imveliso yokutya okuzinzileyo kuZinzo
Ukugcina isixokelelwano sonikezelo olugcinekileyo kuthi kubaluleke kakhulu kwimpumelelo eqhubekayo yeshishini lethu nakwicandelo lilonke.
Njengomnye wabarhwebi bokutya kwaselwandle emhlabeni, sinomdla kwimpilo yexesha elide yeLwandlekazi lwethu. Inani elibalulekileyo lokutya kwaselwandle libanjiswa endle elinokuthi likhokelele ekulobeni kakhulu, ngokungafunekiyo ngokubambisa, kunye neendlela ezonakalisayo zokubambisa. Ngezenzo zethu, kufuneka siqinisekise ukuba siyayikhusela indawo yokuhlala elwandle kunye noluntu oluxhomekeke ekuvuneni izibonelelo zalo, nakwizizukulwana ezizayo.
Ukuzinikela kwethu kugcino lwaselwandle yinto yexesha elide njengoko siqonda ukuba akukho zilungiso zikhawulezayo. Siyabaxhasa abo balobi banezinto ezinoxanduva, ezizinzileyo zokuloba embindini wayo yonke into abayenzayo.
Sithatha umbono wokuba kufuneka sisebenze ngaphakathi kwishishini ukukhokela kunye nefuthe, ukukhuthaza abathengi kunye nabanikezeli beenkonzo zethu ngeendlela ezizinzileyo zokubamba nokwenza imveliso.
Siyawuxhasa umsebenzi wenani lemibutho engekho phantsi kukarhulumente efana neMSC (Marine Stewardship Council) kunye neAlaska RFM (Management Management Fisheries Management) ebeke imigangatho ephezulu yemizi-mveliso ukuqinisekisa impembelelo engephi kwezendalo kwiGlobal Fisheries zethu.
Imigaqo yethu inyanzelisa ukuba:
Funa ukuvunywa okuzimeleyo kweqela lesithathu naphi na apho kunokwenzeka kwaye unike ukhetho kubanikezeli abamkelekileyo.
Sifuna ukwazi umthombo kunye nemvelaphi yeemveliso esizithengisayo kwaye sizame ukunciphisa ukunikezelwa kweempahla apho kunokwenzeka khona.
Asisoze sazi ukuba siyazithengisa iimveliso ezonakalisa imeko-bume okanye zibeke emngciphekweni ubomi beentlobo ngaphandle kwesicwangciso sokulungisa iziqinisekiso zemveliso.
Sibakhuthaza abathengi kunye nababoneleli ukuba benze ukhetho oluzinzileyo.
Sipapashe ngempumelelo imveliso yethu entsha yokutya kwaselwandle efriziwe ngo-2020. Umnqweno wokwenza ifuthe kunye nokwenza intshukumo kukhokelele ekuguqukeni kwe-Makefood kusetyenziso lwempahla enesichumiso. Ngokwenza oku sinethemba lokwenza umthengi, acinge ngononophelo ngefuthe leplastikhi yeplastikhi engenakuphinda isebenze kwindalo esingqongileyo; Kwaye ngokudibeneyo sinokwazisa ngemveliso egqithileyo. Injongo yethu kukuba, ingekuko ukugcina iindawo ezisezidolophini zicocekile kodwa okona kubaluleke ngakumbi, lulwandle lwethu, apho iimveliso zethu zivela khona. Kwelinye icala, ukunciphisa izinto ezingalunganga ezinxulunyaniswa nomzi mveliso wokutya kwaselwandle.
Kwi-Makefood sithathe inyathelo lokuqala, kwaye sikunye, sinamandla okwenza ikamva elingcono nelicocekileyo. Ukukhuthaza uzinzo ngokwenza izinto ezintsha.
Asikholelwa ukuba le nkqubo iyakuze iyeke. Akukho nto iya kuhlala izinzile ngokupheleleyo. Oku sikubona njengohambo kunendawo esiya kuyo.
I-Makefood iya kubonelela abathengi bethu ngeenkonzo ezigqwesileyo. Simi ngasemva kweemveliso zethu kwaye sijongana nayo nayiphi na imiba enokuvela ngexesha lokufumana, ukuhambisa kunye nokuhambisa. Siza kubonelela ngamaxabiso akhuphisanayo kwisikhongozeli ngasinye - siqinisekisiwe.
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye u-pricelist, nceda ushiye iinkcukacha zakho zonxibelelwano kwaye siya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24.
Igumbi 4810, Huarun Isakhiwo A, No. 6 Shandong Road ， Qingdao ， China
Imveliso eshushu, Imephu yendawo, I-China ekhuhliweyo iTilapia GS, Frozen Tilapia inyanga isikiwe, I-China Frozen Tilapia, Frozen Tilapia GGS, I-China iTilapia GS, I-ASC tilapia fillet,